एक खर्ब १६ अर्ब लागतको मोनोरेल कुद्ला त काठमाडौँको चक्रपथमा ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
एक खर्ब १६ अर्ब लागतको मोनोरेल कुद्ला त काठमाडौँको चक्रपथमा ?
काठमाडौँ, भदौ २८ । काठमाडौँमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचनका बेला घोषणा गरेको ‘एक सय दिनका एक सय एक काम’ मा काठमाडौंमा मोनोरेल निर्माण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनले आफ्नै कार्यकालमा काठमाडौँबासीले मोनोरेल चढ्ने सपना पूरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । उनको सो प्रतिवद्धताले मूर्त रुप प्राप्त गर्ने संकेत गरेको छ । चाइनाको सिआरसीसी कम्पनीले गत जेठ ११ गते ६ महिनाभित्र प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता गरेको थियो । त्यहि सम्झौता अनुसार काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासँग काठमाडौँको चक्रपथमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सो कम्पनीले बुझाएको छ । सम्झौत गरेको चार पनि नपुग्दै सिआरसीसीले आज सोको प्रतिवेदन बुझाएपछि काठमाडौँबासीको मोनोरेल चढ्ने सपना पूरा हुने संकेत संकेत देखिएको हो ।
चक्रपथमा मोनोरेल निर्माणका लागि करिब एक खर्ब १६ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनसहितको प्रतिवेदन सो कम्पनीले दुबै महानगरपालिकाका मेयरलाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्रतिवेदनमा मोनोरेलका लागि प्राविधिक, भौगोलिक, आर्थिक, वातावरणीय सबैको सम्भाव्यताको समेत अध्ययन गरेको बताइएको छ । कम्पनीले सबै हिसावले चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । चिनिया कम्पनीले दुबै महानगरपालिकाले निर्माणका लागि सहमति दिए आफूहरु डीपीआरका लागि तयार रहेको पनि जानकारी दिएको छ । सो कम्पनीका इण्टरनेशनल म्यानेजर झावो सिवावोले पनि आफूहरु चक्रपथमा मोनोरेल निर्माणका लागि इच्छुक देखिएको जानकारी दिए ।
उनले जतिसक्दो छिटो निर्णय दिए आफूहरुे डीपीआर अघि गर्ने पनि जानकारी दिए । प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि काठमाडौँका मेयर शाक्यले आफ्नै कार्यकालमा काठमाडौँवासीको मोनोरेल चढ्ने सपना पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै चिनिया कम्पनीले सम्झौता गरेको समयसीमा भित्रै प्रतिवेदन बुझाएकोमा आफू खुशी भएको बताए ।‘प्रतिवेदनको दुबै महानगरपालिका मिलेर प्राविधिक अध्ययन गर्नेछौँ,’ काठमाडौँका मेयर शाक्यले भने, ‘हामीले उचित ठान्यौँ भने केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग पनि कुराकानी गरेर काम अघि बढाउने छौँ ।’ उनले काम सुरु गरेपछि पछि फर्किनु नपरोस भन्ने आफ्नो पनि चाहना रहेको बताउनुभयो । ‘हामीले मोनोरेल चढेर विदा हुन्छौँ भनेको छौँ,’ उनले भने, ‘तपाईँहरुले एकै चरणमा काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने बरु दुई–तीन चरणमा भए पनि काम गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । हामी छिमेकी नगरपालिकासँग पनि यो विषयमा छलफल गछौँ ।’
सिआरसीसीले पनि पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म, दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि चक्रपथसम्म र तेस्रो चरणमा चक्रपथदेखि कोटेश्वरसम्म निर्माण गर्न सकिने बताएको छ । सिआरसीसीले डीपीआर सुरु गरेको ६ महिना भित्र प्रतिवेशन बुझाउने र काम कम सुरु गरेको तीन वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । करिब २७ दशमलव ५ किलोमिटरको चक्रपथमा सो कम्पनीले करिब २१ स्थानबाट यात्रु चढाउने र ओराल्ने स्टेशन बनाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पनि चिनिया कम्पनीसँग काम गर्न आफू तयार रहेको बताए ।